Ronald Koeman oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha Kooxdiisa Barcelona uga qeyb galaya kulanka adan ee Atletico Madrid – Gool FM
(Barcelona) 20 Nof 2020. Tababaraha Barcelona ee Ronald Koeman ayaa ku dhawaaqay liiska xiddigaha kooxdiisa ee uga qeyb galaya kulanka adan Atletico Madrid ee horyaalka La Liga.
Barcelona ayaa habeen dambe ku booqan doonta kooxda Atletico Madrid garoonka Estadio Wanda Metropolitano, waxaana liiska uu ku dhawaaqay macallin Koeman hoggaaminaya kabtanka kooxda ee Lionel Messi iyo Antoine Griezmann.
Barcelona ayaa raadineysa inay gaarto guusheedii afaraad ee Horyaalka Spain xilli ciyaareedkan, kaddib markii ay kaliya 3 guul gaartay 7-dii kulan ee ugu horeysay, halka labo kulan ay barbaro galeen, waxaana laga badiyay hal kulan.
Philippe Coutinho ayaa dib ugu soo laabtay liiska kooxda Barcelona kaddib markii uu seegay kulamadii ugu dambeeyay sababa la xiriira dhaawac uu qabay.
Halkaan hoose ka eeg liiska xiddigaha Barcelona uu ku dhawaaqay tababare Ronald Koeman, kuwaasoo ka qeyb galaya kulanka adan Atletico Madrid ee horyaalka La Liga:-